पारिवारिक कलह कसरी हुन्छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उर्दू एफिक एस्टोनियन कन्नडा किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुभेल सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
आवरण लेख | परिवारमा शान्ति कायम गर्नुहोस
जेकबसित * १७ वर्ष वैवाहिक जीवन बिताइसकेकी घानाकी सारा भन्छिन्‌, “हाम्रो भनाभन अक्सर पैसाको विषयमा हुन्छ। जोहो गरेर घरखर्च चलाउन म निकै कोसिस गर्छु। तर जेकब मसित पैसाबारे कुरै गर्नुहुन्न। त्यसैले मेरो दिमाग तातिन्छ। हप्तौंसम्म हाम्रो बोलचालै हुँदैन।”
जेकब पनि यो कुरा स्वीकार्छन्‌। उनी भन्छन्‌, “रिसको झोकमा बेलाबेलामा हाम्रो भनाभन हुन्छ। एकअर्कालाई राम्ररी नबुझ्दा वा आपसी कुराकानी नगर्दा प्रायः यस्तो हुन्छ। कुरै नबुझी झनक्क रिसाउँदा पनि समस्या सुरु हुन्छ।”
हालै विवाह गरेका भारतका अमितको ससुरा एकदिन आफ्नी पत्नीसित पड्किए। अमित यसो भन्छन्‌, “रिसको झोकमा सासू घरबाट निस्कनुभयो। किन त्यसरी चिच्याउनुभएको भनी सोध्दा ससुरालाई मैले उहाँको अपमान गरेको जस्तो लाग्यो। उहाँ त हामी सबैसित रिसाउनुभएको रहेछ।”
गलत समयमा बोलेको शब्दले वा विचार नपुऱ्याई बोलेको शब्दले परिवारमा कलह मच्चिएको तपाईंले पनि याद गर्नुभएको होला। शान्त कुराकानी एक्कासि चर्काचर्कीमा परिणत हुन केही बेर लाग्दैन। बोलीवचनमा नचुक्ने मानिस कोही हुँदैन। त्यसैले कहिलेकाहीं अरूले तपाईंको कुराको गलत अर्थ लगाउनु त स्वाभाविकै हो। तर पारिवारिक शान्ति र मेलमिलाप सम्भव छ।
चर्काचर्की हुँदा तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? परिवारमा शान्ति कायम गर्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? परिवारले कसरी शान्ति कायम गर्न सक्छन्‌? यसपछिका लेखहरू पढ्नुहोस्। (g15-E 12)
^ अनु.3यी लेखहरूमा केही नाम परिवर्तन गरिएका छन्‌।